Mandrel: distro GraalVM maka iwuli Quarkus | Site na Linux
Mandrel: distal GraalVM maka iwuli Quarkus
Red okpu na obodo GraalVM gosipụtara na nso nso a jikotara ọkwa weputara ọhụrụ nkesa by Onyeka Onwenu, akpọ mandrel. A na-atụ anya na na nkesa ohuru a mee ka Red Hat wuo nke Quarkus, Mgbakwunye mara ọkwa na nso nso a Red Hat Runtimes.
Quarkus bụ nwa afọ Kubernetes Java maka JVM na amaala. Kwarkus na-enye ezigbo ihe ngwọta maka ịgba ọsọ ngwa Java, microservices, containers, Kubernetes, FaaS ma ọ bụ igwe ojii. Mandrel bụ ihe mepere emepe ma dị na GitHub, mana ọ nweghị nkesa ọnụọgụ abụọ.
Dabere na ndetu sitere n'aka Mark Little, onye isi nchịkwa injinịa Red Hat, Enwere ike ịkọwa Mandrel dị ka nkesa nke ọkọlọtọ OpenJDK ya na onyonyo GraalVM nke eji eme ya puru iche.
Ebumnuche bụ isi n'azụ iwebata Mandrel site na Red Hat bụ iji melite ọsọ na arụmọrụ nke usoro Quarkus. Ọ bụ usoro nke na-enye mmepe ime obodo na nkwụghachi ngwa ngwa ma kesaa ma ọ bụ na-enweghị nkesa na-ekesa ndị na-eweta igwe ojii.
Kwarkus na-elekwasị anya na ikike iwu ihe eji eme obodo na-amalite ngwa ngwa na ha na-ebelata ụgwọ ọrụ na akụrụngwa na igwe ojii.
N'eziokwu, Red Hat kọwara na maka Quarkus, ihe dị mkpa nke GraalVM bụ ọrụ onyonyo ya nke na - eweputa ihe eweputara n’ime obodo, nke bu ihe njiri mara nke Java iji kwanye aka na igwe ojii. Ya mere, Mandrel na-enye ohere GraalVM na mgbakwunye na OpenJDK 11 na Red Hat Enterprise Linux na nkesa ndị ọzọ OpenJDK 11.
Dabere na Red Hat, ihe dị iche na onye ọrụ dị ntakịrị, mana maka njigide, nhazi mbụ na OpenJDK 11 na GraalVM dị mkpa.
"Na Mandrel, ndị ahịa Red Hat na obodo GraalVM na-erite uru site na mmepe mmepe na-emeghe n'ezie, na Red Hat nwere ike ịkwado ndị ahịa ya na usoro egosiri ya mgbe ha na-enyeghachi obodo ndị ha tụkwasịrị obi ka ha gaa n'ihu na-aga n'ihu na steeti. Nke nka nke oghere ihe mepere emepe." ụlọ ọrụ ahụ kwuru, na-ekwu banyere Mandrel.
Na usoro nke arụmọrụ, GraalVM ji oge mmalite 50 dị ngwa karịa oge dị iche na iji okpukpu 5 dị obere.
Emere ule ndị a dị iche iche site na iji usoro ochie nke usoro Quarkus megide ọnọdụ Java HotSpot. Ọ bụ ezie na nkwalite a chọrọ ogologo oge ịchịkọta, enwere ike iji ya na ntinye nke ọrụ Quarkus Lambda na Azure.
Ọzọkwa, nchekwa Mandrel GitHub enyeghị nkesa ọnụọgụ abụọ. Na ntụle, ndị ọrụ na-achịkọta JDK onwe ha site na isoro ntuziaka. Ọzọkwa, onye nrụpụta ngwanrọ James Ward tụlere GraalVM n'ụzọ zuru ezu ma gosipụta abamuru ya na imeziwanye arụmọrụ, yana ụfọdụ ọnyà, dị ka ngwa ndị dabere na ntụgharị uche.
Dị ka ya si kwuo, nke a na-eweta nsogbu maka ihe oyiyi GraalVM maka ụmụ amaala n'ihi na ntụgharị uche na-eme n'oge a na-agba ọsọ, na-eme ka o siere onye na-edekọ AOT (nnụnụ mbụ) ike ịchọpụta ụzọ igbu.
N'ihe banyere ngwa ndị na-adịghị mkpa iche, ebe obibi Quarkus na-arụtụ aka na uru: 12MB nke RAM na 73MB (mbelata nke 83%) na 0.016 sekọnd na nzaghachi mbụ na 0.943 (mbelata nke 98%) .
Ndị mmepe nwere ike iji Mandrel rụọ ụlọ ha ugbu a, ma ọ bụ na ha nwere ike ịtụkwasị obi na obodo GraalVM ma ọ bụ JDK 11 ọ bụla na nkesa dị elu. Ndị ọzọ na-ekwu na usoro ntọala ndị a nke Java anaghị arụ ọrụ ọfụma na ọ kwesịghị ịbụ ọkọlọtọ ụlọ ọrụ.
Dị ka ha si kwuo, ọbụghị teknụzụ ebumnuche ebe mmadu nwere ike iwere ngwa Java di ugbua wee mee ya ihe omuma. Nke a agaghị arụ ọrụ, ọbụlagodi maka ngwa ndị edere site na ịhọrọ ọbá akwụkwọ site na nnukwu okike Java.
Ndị nke ikpeazụ kwenyere na ndị na-enye ihe dị iche iche na-akụ nzọ n'eziokwu na ọtụtụ ngwa Java bụ ngwa HTTP / ORM / JSON, na mgbakwunye na usoro na nchekwa, wdg.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya ị nwere ike ịkpọtụrụ njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Mandrel: distal GraalVM maka iwuli Quarkus
Debian 8 Jessie anaghị akwado ya